Musviri mukuru young Kells arikuchemedza mukadzi wemunhu nemboro | Nhau Dzevakuru
Home Nhau DzeBonde Musviri mukuru young Kells arikuchemedza mukadzi wemunhu nemboro
Musviri mukuru young Kells arikuchemedza mukadzi wemunhu nemboro
Musviri mukuru young Kells arikuchemedza mukadzi wemunhu nemboro. Mfana iyeye anga ane mbiri yesviro vamwe vaiti ane zimboro zihombe but noone really knew why aidiwa musurburb rese kudai. Asi chemusi uyu ndakanzwa tsitsi….
Kainge kari kaSaturday takagara hedu pacorner pabridge tichirova bonza. Takaona young Kells achibuda pamba pevanhu achimhanya asina shirt or butsu. Murume aimumhanyisa anga akabata zibanga and was shouting kuti “nhasi ndoda kukuuraya mfana wajaira kusvira vakadzi vevanhu”. But Young Kells akavhura gap zvekuti baba vaye vakasara vachichema vakagara pasi muroad imomo. Isu sevanhu vemakuhwa we had to ask kuti chii chatora nzvimbo.
Baba vaye vakatanga kutsanangura….
Ndakadzoka early kubva kubasa coz ndanzi basa rapera instead ndasvika kumba wanei kamfana ako kari busy kusvira mukadzi wangu nezimboro rako. Mai Mwana vanga vachitochema kuburitsa misodzi chaiko apa vachidaidzira kuti “svirisa kani nezimboro rako iro, murume wangu ane kadiki”.
Ndakada kuseka ndichinzwa izvi but ndakasimbisa baba ava kuti ndinzwe nyaya yese and so he continued….
Mukadzi wangu wemakore gumi anga akavhura makumbo zvandisati ndamboona akaita apa achichemera mboro nhai shuwa how do i even complete nemfana ane zimboro rakadaro?
That was it for me and ndakafa nekuseka. Baba vaya vakaramba vachichema ndokunanga kumba kwavo. Next takaona mai vaya vachibuda panze vachimhanya vakasunga zambia asi vaidadzira zvinyadzi…. “dai waindisvira zvakanaka ndisingatsvage mboro hombe kunze!” Kukundwa nekamwana kadiki kukoira.
Takaseka tiripaBridge hedu kudaro mai vaya vachirova bara past us… Young Kells haana kubatika kuti atipe comment…asi vamwe varikuti mai vaya vakutogara nayoung kells but hanzi adzikama these days nekuti mai vacho vanemari saka vanomuitira zvese zvaanoda.
Mudzimba umu varume ipai vakadzi zvavanoda and make sure kuti vanenge vaguta mboro or munozonzwa kuti vakusvirwa nana young Kells panze apo.
zimboro raKells kunaka
Previous articleMachemedzero andakaita twuvana kwechikoro nemboro
Next articleBasa rekabhinzi pamunhukadzi